Dhaqaalaha suuqa: waa maxay, faa iidooyinka iyo qasaaraha iyo tusaale | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Casudi casals | 29/06/2021 16:00 | Dhaqaalaha guud
Waxaad u badan tahay inaad horey u maqashay suuqa ama dhaqaalaha suuqa xorta ah. In kasta oo dadka badankood si otomaatig ah ula wadaagaan dhaqaalaha, in yar baa runtii fahamsan macnaheeda. Runtii waa maxay dhaqaalaha suuqa? Sidee u shaqaysaa? Muxuu nidaamkani tilmaamayaa?
Ujeeddada qodobkani waa in la caddeeyo dhammaan shakigaas la xiriira dhaqaalaha suuqa. Waan kuu sharixi doonaa waxay tahay, faa iidooyinkiisa iyo qasaarahiisa iyo tusaale faham wanaagsan.
1 Waa maxay dhaqaalaha suuqa?
2 Faa’iidooyinka iyo faa'iido darrada dhaqaalaha suuqa
3 Tusaalaha dhaqaalaha suuqa
Waa maxay dhaqaalaha suuqa?
Markii aan ka hadlayno dhaqaalaha suuqa, ama suuqa xorta ah, waxaan tixraaceynaa abaabulka iyo dejinta waxyaabaha soo saarista iyo cunsuriyadaha kala duwan ee bulshada. Kuwani waxay ku xeeran yihiin sharciyada caanka ah ee saadka iyo baahida. Asal ahaan waa qaab furfuran oo ay difaacaan kuwa aaminsan in Gobolku uusan faragelin, ama ku sameyn inta ugu yar ee suurtagal ah, arrimaha dhaqaalaha waddan kasta.
Dhinaca kale, waxaa jira dhaqaale toos ah, oo Dawladdu shuruudaha dhaqaalaha si ay u fuliso qaar ka mid ah mashaariicda bulshada, siyaasadda iyo fikirka. Si kastaba ha noqotee, ma jiro wax la isku raacsan yahay oo ku saabsan halka xudduudahu u dhexeeyaan dhaqaalaha amarrada iyo dhaqaalaha suuqa. Waa badan tahay, Ereyga 'suuq isku dhafan' ayaa bilaabay in loo adeegsado loola jeedo meel dhexe.
Sidoo kale, waxaa jira doodo ku saabsan dhinacyada dhaqaalaha ee loo daayo suuqa xorta ah iyo kuwa ay tahay in wax laga qabto. Si kastaba ha noqotee, dhaqaalaha suuqa wuxuu kujiraa aduunka oo dhan oo qeyb ka ah hantiwadaaga, haa, meelaha qaar si aad u ballaadhan iyo meelo kale in ka yar.
Nidaamka dhaqaalaha suuqa dhexdiisa Waxaa jira laba nooc oo tartan ah oo lagu muujiyo:
Tartanka ugu fiican: Tartankan noocan ahi wuxuu ku jiraa oo keliya xaalad ku habboon, xilligan. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu xakamayn doonaa oo keliya sharciyada bixinta iyo baahida. Kuwani waxay u muuqdaan inay ku guuleystaan ​​xasillooni iyo isbarbar dhig.
Tartan aan fiicnayn: Dhinaca kale, tartan aan dhammaystirnayn wuxuu dhacaa marka ay jiraan faragelin xagga dhaqaalaha ah oo ay yeeshaan arrimo dibadeed. Kuwani waxay noqon karaan, tusaale ahaan, kabitaanno, ilaalin dawladeed, hanti-wadaag, tartan aan caddaalad ahayn oo u dhexeeya shirkadaha iyo xeerarka.
Faa’iidooyinka iyo faa'iido darrada dhaqaalaha suuqa
Sida la filayo, nidaamka dhaqaalaha suuqa wuxuu leeyahay faa iidooyin iyo khasaarooyin, sida ugu dhow wax walba. Marka xigta waxaan soo qaadan doonaa faa iidooyinka noocan oo kale ah ee dhaqaale noo keeni karo:
Qiimaha ugu dambeeya ee hoose macaamiisha sababtoo ah tirada badan ee tartamaya.
Noocyo badan oo xagga sahayda ah. Sidaa awgeed, macaamilku wuxuu leeyahay xulashooyin badan oo uu ka kala xusho marka ay doonayaan inay wax iibsadaan.
Guud ahaan, ganacsadayaashu waxay u muuqdaan inay dhiirrigeliyaan dadaallada oo ay qatar galiyaan. Xamili this dhaqdhaqaaqa dhaqaale waa la ilaaliyaa.
Marka loo eego aragtiyaha dhaqaaleyahannada qaarkood, bulshada waxay lahaan laheyd xoriyado badan oo siyaasadeed iyo madaniga ah haddii xorriyadda dhaqaalaha la siin lahaa.
Inkasta oo qodobbadan ay u muuqdaan kuwa fiican, haddana waa inaad maskaxda ku haysaa dhaqaalaha suuqa yeelan karaan waxyeellooyin gaar ah Maxaan ka fiirsanaa:
Qeybaha yar-yar ee ladnaanta ayaa laga yaabaa in la faquuqo, maadaama kuwa aan haysan raasamaal aysan awoodin inay soo galaan ciyaartan dhaqaale.
Sababtoo ah raasamaalku wuxuu ku dhammaan doonaa isla kooxaha bulshada, ma jiri lahayn dhaqdhaqaaq fasal. Taasi waa in la yiraahdo: Faqiirku wuxuu sii ahaan doonaa faqiir halka taajirku sii ahaan doono taajir.
Waxaa jira u janjeera gaar ahaan tartan aan caddaalad ahayn iyo keli ahaansho. Si kastaba ha noqotee, kiisaskaani badanaa waxay la xiriiraan faragelinta Gobolka.
Dhaqaalaha suuqa wuxuu waxyeelo u geysan karaa deegaanka. Nasiib darrose, dhinacan inta badan looma tixgeliyo inuu yahay qodob ku habboon aragtiyaha dhaqaale ee deeqsi ah.
Tusaalaha dhaqaalaha suuqa
Si aan si fiican u fahamno nidaamka dhaqaalaha suuqa, waxaan ku sharaxeynaa tusaale. Hawlgalka nidaamkan dhaqaale waxaa meteli kara kala duwanaanshaha qiimaha ee la xiriira teknolojiyadda markii la horumariyo. Waqtiga marka horumarka tikniyoolajiyadda cusubi soo muuqdo, qiimayaashiisu inta badan aad ayey u sarreeyaan oo kaliya dadka aqoonta u leh ayaa heli kara. Sidaa darteed, dalabka jira wuu xadidan yahay. Si kastaba ha noqotee, Maaddaama baahida loo qabo tiknoolajiyaddan cusub ay kordhayso, tartamayaasha cusub ayaa iyaguna soo muuqda, iyadoo la siinayo ikhtiyaarro badan oo wax iibsi ah macaamiisha. Nidaamkan dartiis, sicirku wuxuu u egyahay inuu dhaco, taasoo horseedaysa isku-darka isticmaalkiisa.
Gabagabadii, waxaan dhihi karnaa dhaqaalaha suuqa, sida dhamaan nidaamyada dhaqaale ee kale ee jira, waxay leeyihiin faa iidooyin iyo qasaarooyin muhiim ah oo lagu xisaabtamo. In kasta oo uu yahay nidaam caan ka ah dhaqaaleyahannada badankood, haddana weli waa wax aad uga fog gobolka utopia oo dad badani ku doonayaan xooggooda oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Dhaqaalaha suuqa
Bulshada aan lagaranaynin